Intambo ye-Anti Bacterial Copper yarn, Ilaphu le-Anti Odor, Ilaphu laManzi oFudumeza igesi-3L Tex
imisonto yobugcisa kunye nemisonto
Isisombululo sokumelana nesantya esiphezulu
intsimbi yefayibha yentsimbi
iiteyiphu zefayibha yesinyithi / imikhono
i-kevlar tubing / imikhono
Isinyithi seengcingo eziqhubayo
Ngenani elikhulu loyilo lobunikazi bemveliso kunye nezinto ezintsha zetekhnoloji, ukuqhubela phambili kokuvelisa kunye nokuvavanya izixhobo zokujija ifayibha, ukugubungela, ukutyabeka, ukuluka impahla eyolukiweyo njl.njl.ikhethekileyo ekuphandeni, ekuphuhliseni, ekuveliseni, ekuqhubeni umsonto, ilaphu, amalaphu enziwe ifayibha yesilivere, ifayibha yentsimbi, iFeCrAl, i-aramid, itayitile yethini, ifayibha yeglasi njlnjl. Iqela labasebenzi abasemgangathweni bokulawulwa kwemveliso ekumgangatho ophezulu kunye nomqolo wobugcisa obunemveliso, siqinisekisa ukuba itekhnoloji yethu kunye nemveliso entsha iyaphelela ngokugqibeleleyo.
Silver camera polyamide conductive / uvikele fa ...
Ngokungqongqo uLawulo loMgangatho
I-3L Tex ithatha iimfuno zabathengi ukulawula ngokungqongqo onke amanyathelo emveliso kunye nenkqubo yokuhlola, kunye nokubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo njengoxanduva lwazo!
Ulawulo lwenkampani kunye neenjineli zihlala zigxila kuyilo loyilo lwemveliso kunye nokuphuculwa komgangatho ezibandakanya ngokuqhubekayo iimfuno zabathengi bethu, ukuze ziyile kwaye ziphuhlise iimveliso ezizodwa ngokwesicelo esikhethekileyo sabathengi kunye neenkalo zesicelo esikhethekileyo.
Ukupakisha kwethu kungqongqo ngokungqinelana neempawu zemveliso, ukukhethwa kwezinto kulunge ngokusingqongileyo, ukupakishwa kwangaphakathi nangaphandle kuyacelwa ukuba kuqiniswe, ubungqina bokufuma, ukupakishwa kwangaphandle komelele kwaye kuqinile, kuchasene nokophuka kunye noxinzelelo, ukuze Ukuqinisekisa ukuba iimpahla zikhuselwe ngokupheleleyo, zigqibelele kwaye azinasiphako kusiwa kubathengi bethu.
I-3LTEX ithathe inxaxheba kwi-A Plus A enkulu ...
Inkampani ye-3LTEX ithathe inxaxheba kwiTechtextile ...